2019 Shirka Shiinaha Shiinaha - Si guul leh ayaa loo qabtaa inta lagu guda jiro Maalinta Shiinaha ee Shiinaha - Geofumadas
Mee, 2019 Geospatial - GIS, tabo cusub
Shirkada Shiinaha Shiinaha ee 2019 ayaa si guul leh looga qabtay 23 ilaa 25 bishii Abriil ee Changsha, Shiinaha, oo qayb ka ah dhacdooyinka Shiinaha ee Shiinaha . Waxay u adeegtaa sida daaqad loogu talagalay dadweynaha Shiinaha iyo adduunka si ay si fiican u fahmaan horumarinta shiinaha ee China.
Sidee bay Shirka Shiinaha ee 2019 la xidhiidha munaasabadaha Maalinta Maanta?
Tan iyo 2016, Shiinaha ayaa aasaasay Abriil 24 oo ah Maalinta Maalinta ee Dalka.
Hogaaminta Maamulka Gobolka ee Sayniska, Teknolojiyada iyo Warshadaha ee Difaaca Qaranka, Maamulka Shahaadada Qaranka ee Shiinaha (CNSA) iyo Ururka Shiinaha ee Sayniska iyo Technology, by Society Chinese ee xiddigaha iyo Space Shiinaha Foundation abaabulan, shirka waa qayb ka mid ah dhacdooyinka guriga ee Day Space ee Shiinaha, dhacdooyinka kale sida Xaflada furitaanka Maalinta Space ee Shiinaha, United Nations / Shiinaha Forum on Solutions Space - Fulinta Yoolalka Horumarka joogtaysan, Horumarinta Dood Cilmiyeed ku saabsan Space Industry 20 Hunan iyo dhacdooyinka kale.
In ka badan wakiilada 1600 waxay ka qaybgaleen dhacdooyinka maxaliga ah, oo ay ka mid yihiin tacliinta, shakhsiyaadka dhexe iyo hay'adaha dawladda, wakiillada qaybaha gaarka loo leeyahay, martida ajnabiga ah ee ka soo jeeda ururada caalamiga ah ee 10 iyo in ka badan hay'adaha 50.
Zhang Kejian, oo ah agaasimaha CNSA, ayaa hadal ka jeediyay xafladdii furitaanka
Maxay yihiin waxyaabaha muhiimka ah ee Shirka Shirka Shiinaha ee 2019?
Mawduuc ku saabsan raadinta Riyada Muuqaalka ah ee iskaashiga guusha-guusha - Racfaanka Mawqifka ah ee Win-Iskaashiga IskaashigaShirku waxaa uu si buuxda u muujiyaa teknoolajiyada aerospace sare, baadhayaa riyadii ka da'ayeen si qoto dheer oo kor u iskaashi qoto dheer berrinka bannaan ee, ku salaysan sadex dhinac: meel sayniska, technology iyo codsiyada, iyo afar hawlaha: tacliinta, hawlaha warshadaha, siidaynta sayniska iyo dhaqanka
Gudaha muhiimka ah:
Horseedka ee aerospace iyo dibadda soo dhawaaday podium in ay soo bandhigaan guulaha cusub iyo horumarka mashaariicda spaceflight waaweyn ee Shiinaha, sida Exploration Barnaamijka Lunar ee Shiinaha, System Navigation Satellite Beidou, ka Mashruuca Mashruuca Manned ee Shiinaha iyo Barnaamijka Gaofen. iyo in laga wada xaajoodo si qotodheer u ah xaaladda horumarka iyo dhibaatooyinka ugu muhiimsan dunida oo dhan.
Wu Weiren, Madaxa Injineer ee Barnaamijka Sahaminta Dayaxa ee Shiinaha iyo akadeemiyada akadeemiyada injineeriyadda Shiinaha, ayaa dib u eegay guulaha laga gaadhay barnaamijka baarista Lunar Shiinaha ee Dayax isla markaana mustaqbal eegayay. "Chang'e-5 ayaa la bilaabi doonaa oo soo celinta buuxda ee muunadda dayaxa la gaari doonaa mustaqbalka dhow."
Orday Chengqi, Agaasimaha Xafiiska Maamulka Navigation Satellite System of China iyo Agaasime Ku-xigeenka of System of Beidou Navigation System Satellite, haddana wuxuu keenay guulihii ugu dambeeyay iyo horumarka barnaamijka Beidou ah. Sannadkan, Beidou 3 bilaabi toddoba ilaa sagaal satalayt. 2020 wareegsan dhamaystirka guud ee dhismaha ka mid ah network Beidou 3, ku siin kara navigation aasaasiga ah, xiddigaha fiicnaaday ku salaysan, isgaarsiinta fariin gaaban, goobidda iyo samatabbixinta caalami ah, boos sax ah iyo adeegyada kale ee dunida.
Kulamada isku midka ah ee 10:
Mowduucyada laga dooday waa kala duwanaayeen, oo ay ka mid yihiin bilowga caqliga, tiknoolijiyada qorsheynta qorsheynta ee riwaayadaha xaaladaha cusub, soo saarida aerospace-ka iyo qalabka, aerospace-standardization, iwm.
Bandhigu wuxuu u qaybsan yahay afar qaybood: Shiinaha iyo shirkado ku yaal warshadaha ganacsiga dibada, Hantidhowrka goobaha, Jaangoynta sayniska iyo sawirada sawirka. Ka sokow Shirkadda Aerospace Sayniska iyo Teknolojiyada ShirkaddaCASC) iyo Shiinaha Aerospace Sayniska iyo Warshadaha (CASIC), Shirkadaha aerospace New sida ZeroG Space, Min Space, Galactic Energy iyo SPACETY iyo sidoo kale shirkadaha berrinkii macluumaad geospatial, sida ESRI, GeoVIS iyo SatImage Information Technology sameeyey hortooda, bixinta aragtida dhamaystiran oo silsiladda warshadaha aerospace Shiinaha ee, is-dhexgalka ee warshadaha aerospace iyo natiijooyinka codsiyada ay.
Waxaan sharfay in Hay'adda Yurubta Yurub iyo CNES (Hay'adda Dalxiiska ee Dawladda Faransiiska) ay ku soo bandhigaan guulahoodii halkan marti ahaan.
Xu Dazhe, Guddoomiyaha Hunan, Zhang Kejian, Agaasimaha CNSA iyo mas'uuliyiin kale oo dawladda ah ayaa kormeeray bandhigga.
Xu Dazhe, Guddoomiyaha Hunan iyo Zhang Kejian, oo ah agaasimaha CNSA oo baadhaya bandhigga guul gaadhka hawada
Hawlaha soo bandhigida sayniska:
Todoba khabiir oo ku yaala garoonka ayaa booqday todobo iskuul oo shan maalmood gudahood ah, ka hadlayay guulaha goobta, fidinta aqoonta iyo dhaqanka si ay ula kulmaan ardayda.
The Mrs. Simonetta Di Pippo, Agaasimaha Xafiiska Qaramada Midoobay ee Arrimaha awgiis Space, waano ku saabsan popularization ardayda sayniska meel dheeraad ah siiyey badan Dugsiga Sare 300 No. 1 magaalada Changsha la mawduuca Sahaminta Goobta iyo Sayniska iyo Teknolojiyada Qaramada Midoobay
PoMiyaad nala soo socodsiin doontaa waxyaabaha ku saabsan munaasabadaha kale ee Munaasabadaha Maalinta?
Xilliga Furitaanka (Abriil 24)
CNSA waxay soo saartay qoraal ku saabsan horumarinta aerospace ee Shiinaha oo ah Himilooyinka Horumarinta joogtada ah ee Qaramada Midoobay 2030.
Munaasabadda furitaanka Maalinta Maalinta 2019 ee Shiinaha
Golaha Qaramada Midoobay / Shiinaha ee xalalka xajinta - Hirgelinta Himilooyinka Horumarinta joogtada ah (laga bilaabo 24 ilaa 27 bisha Abriil)
Xu Dazhe, Guddoomiyaha Gobolka Hunan, Zhang Kejian, Agaasimaha CNSA iyo Simonetta Di Pippo, Agaasimaha Xafiiska Qaramada Midoobay ee Arimaha Dibadda ayaa ka qaybgalay xafladdii furitaanka oo ay soo bandhigtay hadal dhiirri gelin leh
Shirkadda CNSA waxay heshiisyo la gashay shirkado gaar ah oo ka shaqeeya Xafiiska Arrimaha Dibadda ee Qaramada Midoobay, Turkiga, Itoobiya iyo Pakistan.
Caamaanka Hunan ee ku saabsan horumarinta warshadaha aerospace
Laba iyo toban heshiis oo ah iskaashiga mashaariicda u dhexeeya shirkadaha 23 / hay'adaha leh qadar maalgelin ee bilyan RMB20 ayaa la saxiixay si guul leh.
Goorma iyo xaggee bay Shirkadda Shirkadda 2020 Shirkadda Shirkadda Shirkadda XNUMX la qaban doonaa iyo ciddee tahay inaan la xiriiro haddii aan jeclaan lahaa in aan ka qayb qaato?
Munaasabada sannadlaha ah, Shirka waxaa la qaban doonaa inta lagu jiro dhacdooyinka Shiinaha ee Maalinta Meelaha (24 bisha Abriil) ee 2020. Goobta waa in la xaqiijiyaa. Marka la eego horumarinta degdegga ah ee ganacsiga qashinka ganacsiga ee qaranka iyo caalamkaba, waxaan rumaysanahay in Shirkadda 2020 Shirka Shiinaha ee XNUMX ay sii badan doonto inay bixiso daneeyaal khuseeya.
Taibo ayaa noqon doonta midka kula soo xiriiri doona haddii aad jeceshahay inaad kaqaybqaadato. Taibo waxaa loo soo bandhigay Iskaashatada Warbaahinta ee Warshadaha (Halkan riix si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shirka) iyo sida Shirkadda Maalgashiga Maalgashiga Shirkadda Shirkadda Shirkadda Shirkadda 2019 ee Shiinaha si loo daboolo dhammaan dhacdooyinka iyo lamaanayaasha shaqaalaysiinta, kafaala qaadayaasha iyo bandhigayaasha.
Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo http://www.taibo.cn/ ama xiriirka may.xu@taibo.cn. Waxaad sidoo kale naga heli kartaa Twitter: TaiboIskuxirka
Post Previous«Previous Isbarbardhig cabbirka wadamada
Post Next #BIM - Koorso dhameystiran oo habka BIM ahNext »